Raayyaan ittisa biyyaa kan Itiyoophiyaa ga’een hojii isaa daangaa Itiyoophiyaa weerara biyyaa alaa irraa eeguu akka ta’e kan ibsan itti aanaa Komishinariin polisii Oromiyaa Janaraal Dachaasaa Bitimaa mootummoonni naannoo haallii humnaan ol ta’e yoo isaan mudate waamicha dhiyeessinaan garu raayyaan Itiisaa bulchiinsa naannoo seenuu akka danda’uu ibsan.
Polisin Federaalaa bulchiinsa naannoo adda addaa keessatti dhaabbattoota mootummaa, daandilee gurguddoo,Yunivarsitiiwwan, ulaa sakatta’aa tokko tokkoo fi kanneen biroo eeguuf maadheffatee akka jiru ibsan. Ta’uus garu imala itti bobba’ee kana bira darbee akka dhiyeenya kana shaashamannee keessatti ta’e nama ajjesuun seeraan ala jedhan Jananaraal Dachaasaan.
Polisiin Oromiaa akka heeraa fi seera biyyatti irra ka’ametti nageenya naannoo ofii eeguu ykn tiksuu irratti bobba’ee carraaqqii gochaa akka jiru ibsanii kun waan duruu barreefamaan lafa ka’ame hojii irra olchuu malee waan haaraa uumamee hin jiru jedhan.
Bulchiinsa naannoo Somaalee keessa kan jiru Liyyuu Polis jalqaba hidhattoota Adda bilisummaa Biyyooleessa Ogaadeen waraanuuf bulchiinsii naannoo deggersa mootummaa Federaalaan kan leenjifate ta’u fi yeroo ammaa sadarkaa looltummaa irra kan jiru ta’u ibsan.
Liyyu Polis eega hidhattoota kana irratti injifannoo gonfatee booda yeroo tokko tokko qonnaan bultootaa fi humnootii nageenya Oromiyaa daangaa irra jiran irratti haleellaa kan geesisee ta’u ka ibsan Janaraal Dachaasaan walitti bu’iisa uumameen yeroo miseensonni Liyyuu polis du’an waraqaa eenyummaan uffata isaanii keessaa argamu kan biyyaa ollaa taate Somaaliyaa ta’u isaa ragaan agarsisuu akka jiru itti aanaa komishinarri polisii naannoo Oromiyaa ibsanii jiru.
Kanaaf humnii kun wal mammakee bifa adda addaan kan ijaarame ta’u fi kana duubaanis deggersii jira jennee ilaalla jedhan.
Mormiin Oromiyaa Itti Fufe
Hoogganaan Gurmuu Al-shabaab Duraanii Haleellaa Guddaa Moqaadishootti Geggeessame Balaaleffate
Aangawaa Gameesa Mootummaa Itoophiyaa Ka Turan Bereket Simoon Tayyitaa Gad-lakkisuuf Gaafatan Jedhama
Keniyaa Keessatti Polisiin Nama Lama Ajjeese
Laayberiyaa Keessatti Sagaleen UmmataA Lakka’amaa Jira